8 km isan’andro mantsy ny dia an-tongotra mandroso sy miverina hataona mpianatra iray mandranto fianarana eny anivon’ny EPP noho ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa. Matory fotsiny vokatr’izany ny ankamaroan’ny mpianatra rehefa tonga any an-tsekoly, hany ka mitotongana hatrany ny voka-panadinana. Anisan’ny fikambanana tonga nanohana ireo mponina any an-toerana ny AS-TAFIM, tarihin’ny filoha nasionaliny Ramamonjisoa Fulgence. Nanangana sekoly iray ao Nosibefody izy ireo, misy efitrano maromaro. Vokatry ny ezak’ireo mpikambana ihany no nahafahana nanangana izany. Efa vita soa aman-tsara ankehitriny ny fotodrafitrasa ary miezaka milofo amin’ny fanamboarana ireo dabilio hianaran’ny mpianatra indray izy ireo. Mangataka ireo malala-tanana vonona ny hanohana azy ny AS-TAFIM hahafahana mamita tanteraka ny asa. Kasaina hatolotra ny fitondram-panjakana hatao sekoly ambaratonga fototra hiasa manomboka amin’ity taom-pianarana vaovao 2019-2020 ity mantsy ny fotodrafitrasa.